Miyay dhammaan adeegyada SEO-ga lagu dhisay qorshe suuqgeyn ah?
Waa hadal been ah in qorshaha adeegyada SEO uu yahay kaliya shirkado waaweyn oo badan. Waxaa sidoo kale ku haboon ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Qorshaha si taxadar leh loo qorsheeyey SEO waa habka ugu kalsoonaan karo oo wax ku ool ah si loo daboolo baahiyaha ganacsigaaga iyo aad u hesho TOP ee makiinadaha search.
Sida laga soo xigtay xogta tirakoobka, wax ka badan 80% shirkadaha waaweyn iyo ku dhawaad ​​kala badh shirkadaha yaryar waxay leeyihiin qorshe suuq geyn. Tirakoobyadani waxay muujinayaan in qorshaha adeegyada SEO uu yahay farsamo ay tahay in uu ka mid yahay ganacsatada internetka.
Sidaa daraadeed, aan ka wada hadalnay sida website-yada guuleysta ay u heleen halka ay maanta joogaan. Qorshaha adeegga SEO
Qorshaha adeega SEO wuxuu u adeegaa sidii loo kordhin lahaa qorshe ganacsi oo siinaya milkiilayaasha bogga istaraatajiyad gaar ah oo lagu horumarinayo hadafyada ganacsiga. Waxay siisaa jihe cad oo loogu talagalay ganacsatada internetka sida loo riixo boggooda ilaa Google. Qorshahani wuxuu dhigayaa dhamaan fursadaha muhiimka ah iyo waliba hanjabaad kasta oo suuro galka ah ee guushaada. Waxay u baahan tahay qorshe adag iyo falanqeyn iyo sidoo kale in la ogaado qaybaha ugu yar ee nidaamka dejinta. Qorshahaaga adeegyada SEO wuxuu ka kooban yahay talaabo tallaabo tallaabo ah sida aad u baahan tahay si aad u hirgeliso xeelado istimaalin ah si loo hagaajiyo aqoonsigaaga aqoonsigaaga iyo kor loo qaado heerka celinta.
Maxay yihiin sababaha lagu dhisayo qorshaha adeegyada SEO?
First of all, waxaad u baahan tahay qorshe adeegyada SEO sababtoo ah waxay kaa caawin doontaa inaad diirada saarto dhammaan daqiiqadaha muhiimka ah ee ololeynta optimization.
Miyaad weligaa isku dayi lahayd inaad hesho meel gaar ah adoon lahayn cinwaan gaar ah iyo ballan? Dabcan, waxaa laga yaabaa inaad nasiib hesho. Si kastaba ha noqotee, waxaa dhici karta inaad sidoo kale ku soo gasho gobol kale. Weligaa ma ka heshay wicitaan ka socda adeegga warbaahinta ee maxalliga ah oo isku dayaya inuu buuxiyo booska xayeysiiska? Heshiiskan kulul ee ugu dambeeya ee kulul wuxuu soo jeedinayaa inuu iibiyo saacadaha hawada ama booska cinwaanka ah uu ku imaan karo siyaasad qiimo jaban. Sidaa darteed, xitaa haddii xayaysiisku macquul yahay, go'aanka daqiiqad ee ugu dambeeya waxaa laga yaabaa inuu macnaheedu yahay inaad lacag ku bixiso aadan u baahnayn inaad ku qarashgareyso ama lacag aad u baahan tahay si aad u maal gashato beer kale. Markaad isku dhafo dhammaan cawaaqibka, waxaad u badan tahay inaad fahamsan tahay in go'aankaaga uusan dabooli karin yoolalkaaga suuq-geyneedna waxaad lacag u qoondeyneysaa kaliya. Sidaa darteed, haddii aadan haysan waqti aan xadidnayn ama ilo dhaqaale oo aan xadidneyn, waxaad u baahan tahay qorshe ku habboon adeegyada SEO si aad uga dhigto ganacsigaaga internetka oo barwaaqoobo oo labanlaaba dakhligaaga.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in yoolalkaaga suuqgeyntu uu yahay mid si qaas ah, la qiyaasi karo, la gaari karo, macquul ah oo wakhtiga ku xidhan. Qorshahaagu waa inuu ka tarjumaa hadafyada qorshahaaga ganacsigaaga, laakiin habab faahfaahsan Source .